လူဇင်ဘတ် SOPARFI - Non-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ် SOPARFI non-စညျးမဉျြးစညျးကမျးကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ SOPARFI ဘဏ္ဍာရေးပါဝင်၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပြင်သစ်ဖြစ်သော (Societe က de ပါဝင်သူfinancières) ကိုဆိုလိုတာပါ။ အခြေခံအားဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီဆောင်ရွက်သည်။ လူဇင်ဘတ်အများအပြားပုံစံများကိုယူသူတို့၏ "ကိုင်ပြီး" ကုမ္ပဏီများမှခွင့်ပြု: စီမံခန့်ခွဲမှုဦးပိုင်; စစ်ဆင်ရေးဦးပိုင်; ဘဏ္ဍာရေး Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အစည်း Holding ။
တစ်ဦး SOPARFI များအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်, ဆည်းပူးစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ဒါမှမဟုတ်လူဇင်ဘတ်၏အပြင်ဘက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမြတ်အစွန်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအရုံးနှင့်လူဇင်ဘတ်ရဲ့ဥပဒေများ၎င်း၏ဆောင်းပါးများမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုင်ထားကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေအများအပြားအမျိုးအစားများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦး SOPARFI ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သည့်တစ်ဦးကိုင်ထားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကို "ရောထွေးကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီ" အဖြစ်လူသိများသည်။
လူဇင်ဘတ် SOPARFI ကောင်းကျိုးများ
တစ်ဦးက SOPARFI သည်ဤအားသာချက်များရှိနိုင်သည်
•အဆင်သင့်ဥရောပ "မူပိုင်ခွင့်-လက်အောက်ခံ" ကုသမှုများအတွက်ငျြးပွညျ့မီ;
•တစ်ဦး Societe Anonymous (SA) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါ privacy ကိုများအတွက်လျာထားခြင်းဖြင့်ကျင်းပယင်း၏ရှယ်ယာများရှိနိုင်ပါသည်; နှင့်
•မြောက်မြားစွာဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး (မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဒီဇိုင်းများ, မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဒိုမိန်းနာမည်များ) ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
လူဇင်ဘတ် SOPARFI အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ် SOPARFI ကဤအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားနိုင်သည်
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များ privacy ကိုများအတွက်မဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၌နေကြသည်မဟုတ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်သာနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါသည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: စာရင်းစစ်မလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အနိမ့်အခွန်ကောက်ခံမှု: လူဇင်ဘတ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချမဟုတ်ကုမ္ပဏီများသာ 3,210 ယူရို၏နှစ်စဉ်အပြားအခွန်ပေးဆောင်။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေထိုင်သူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အားလုံးအခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အေဂျင်စီများအားလုံးဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
လူဇင်ဘတ် SOPARFI အမည်
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကိုသင့်လျော်သောစကားများကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုဖော်ပြနှင့်အတူသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "LLC" အဖြစ်က၎င်း၏သင့်လျော်သောအတိုကောက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရမည်, သို့မဟုတ်စတာတွေဟာ "ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "PLC"
တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ်သက်သေခံရှေ့နေလူဇင်ဘတ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအစည်းအရုံးရဲ့ဆောင်းပါးများဖိုင်များကို။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများကိုလည်းတရားဝင်သတင်းလွှာ (အခြားနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုတရားဝင်ပြန်တမ်းခေါ်) အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ တဦးတည်းကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံကနေတရားဝင် entity ဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်လျှောက်လွှာလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးက SOPARFI ထိုကဲ့သို့သောလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC), သို့မဟုတ်တစ်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC), သို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာ (SCA) က Limited တစ်မိတ်ဖက်အဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကနိုင်ငံခြားသားတွေတစ် SOPARFI အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်တစ် PLC တက်ထားကြ၏။ ဥပဒေရေးရာ entity ဤအမျိုးအစားတစ်ခုမှာအားသာချက် privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရှယ်ယာရှယ်ယာတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြုမူဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကယ်. မရှိထပ်မံမှတ်ပုံတင်လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်လာမီ, ကစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများ (အဓိကအားသို့မဟုတ်ဒုတိယအရှိမရှိ) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတဲ့ SOPARFI တစ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ကကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ကို "autorisation d'établissement") နှင့်အတူကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်ရယူကြောင်းမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်အသေးစားဝန်ကြီးဌာနထံမှနဲ့ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး Value ကို Added အခွန် (VAT) အရေအတွက် application ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
SOPARFI ရဲ့တစ်ခုသာလုပ် SA အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ် SARL ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရှိမရှိတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ (SARL) တဦးတည်းမန်နေဂျာတစ်ဦးနိမ့်ဆုံးလိုအပ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ SOPARFI ရဲ့။ အဆိုပါမန်နေဂျာဒေသခံတဦးကဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးနှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာများကိုင်ဆောင်၏ထို option သူမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းကိုသာပိုင်ဆိုင်မဟုတ်လျှင်လုပ် SA အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် SOPARFI ရဲ့အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာ (သူဝါးရှယ်ယာရှင်နိုင်ပါတယ်), သို့မဟုတ်သုံးခုဒါရိုက်တာများကိုခနျ့အပျရမယျ။
တစ်ဦးက SA တက် paid ကအနည်းဆုံး 31,000% နှင့်အတူ 25 ယူရိုတစ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ရှိရမည်။ တစ်ဦးက SARL 12,500 ယူရိုတစ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
မြို့တော်ငွေသားနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကြင်နာအလှူငွေအတွက်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ တစ်လုပ် SA မှကြင်နာပံ့ပိုးမှုများအတွက်၎င်း၏တန်ဖိုးကို ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီ၏လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်၏အစီရင်ခံစာလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးက SARL ရဲ့ကြင်နာပံ့ပိုးမှုများကို၌ဤမလိုအပ်ပါဘူး။
SOPARFI ရဲ့အစိုးရကနှင့်အတူစာရင်းစစ်သို့မဟုတ်ဖိုင်အကောင့်ရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်တစ်ဦးဆီးခုံမို့မို့လုပ် SA ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်အကောင့်အတည်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။
တစ်ဦး SOPARFI တစ်ဦးရောနှောကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းကစင်ကြယ်သောကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအမြတ်အစွန်း၏အခွန်ကုသမှုစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ရရှိခဲ့ရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။
အားလုံးနေထိုင်သူလူဇင်ဘတ်ကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှု, ဘဏ်အကောင့်များနှင့်အာမခံစုစုပေါင်းက၎င်း၏စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေစာရွက်၏ 90% သာ 3,210 ယူရို၏နိမ့်ဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ထက်ကျော်လွန်ရှိရာလူဇင်ဘတ်အထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။
2013 ကတည်းကခွဲဝေနှင့်ဖျက်သိမ်းမှုနှင့်ရောင်းချရရှိသော၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်း (29.22% ၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုထိပ်ပေါ်မှာ 6.75% ပေါင်း 7% တစ်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် Surtax ၏စည်ပင်သာယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွန်နှုန်းကို) 15.47% ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအခွန်မိဘကုမ္ပဏီနှင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရန်၎င်း၏လက်အောက်ခံများအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုစနစ်အောက်မှကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး SOPARFI တစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းထက်အခြားစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းလျှင်အပြင်, 15% တစ် Value ကို Added အခွန် (VAT) လည်းမရှိ။
ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, အနိမ့်အခွန်များ, privacy ကို, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တဦးတည်းဒါရိုက်တာနှင့်မျှမတို့စာရင်းစစ်: တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ် SOPARFI ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။